Soosaarayaasha baaldi dhagaxyada Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | MINYAN
Baaskiilada dhagaxa qodda waxay la qabsataa saxanka dhumucda weyn, salka hoose ku dar saxanka xoojinta, ku dar saxanka waardiyaha dhinaciisa, rakib saxanka ilaaliyaha dhinac, hayaha ilkaha baaldiga oo xoog badan, oo ku habboon munaasabadaha dharka sare, sida quruuruxa, granite iyo macdanta macdanta ee hawlgallada xamuulka adag. Tusaale: Xaaladaha qoditaanka ee nolosha noloshu u dhaxeyso 200 illaa 400 saacadood oo leh tilmaamaha Penetration Plus. Taargooyinka gunta hoose ayaa qiyaastii 50% ka dhumuc weyn baaldiyo culus.
Taarikada xirashada dhinacyadu waxay qiyaas ahaan 40% ka weyn tahay qotominta xoojinta baaldiga dhulka lagu sameeyo si loogu daro difaac ka dhan ah xirashada xoqidda iyo gouging Adapters-ka iyo tilmaamaha ayaa la qiyaasi karaa si loo waafajiyo culeysyo badan iyo xaaladaha xoqida.
Dhinacyada ayaa horay loogu qoday xulashooyinka dhinaca ikhtiyaariga ah iyo ilaaliyayaasha dhinac ee baaldiyo waaweyn.
Xirxirida iyo rarka: Minyan baaldi waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo baakadaha ku ridaya kuna ridaya weelka.Waan ognahay xaddidaadda miisaanka ee waddammada, waxaan ognahay sida loo badbaadiyo meel bannaan si loogu soo xareeyo alaabooyin badan oo ku jira weel si loo badbaadiyo xamuulka badeecada ee macaamiisha.Waxaanna u isticmaalnaa filim caag ah in baaldi looga ilaaliyo roobka iyo boodhku u rarka LCL. Dhex dhig suuf u dhexeeya baaldiyo si aad u ilaaliso sawirka. Adeegso suun adag si aad ugu xirto baaldiyo santuuqa si aad uga ilaaliso baaldiyo inay gilgishaan oo u dhacaan inta lagu jiro rarka.
Maadadee isticmaalnaa?* Q355B oo loogu talagalay jawiga shaqada fudud si looga caawiyo macmiilka keydinta kharashka, tusaale ahaan: Qod jeex jeex, jeex jeex, dhoobo, ciid, wasakh.* NM460 oo loogu talagalay shaqada culus ee loo isticmaalo qaybta weerarka, sida, goynta, gogosha hoose ee hoose, iyo xirashada saxanka.* Bislloy oo reer Australia ah, jawiga shaqada ee aadka u adag wuxuu baaldiga siiyaa difaac aad u wanaagsan, dabcan qiimaha wuu yara sara mari doonaa* HARDOX oo Iswiidhan ka timi, lambarka 1aad oo maaddo adag ah, oo loogu talogalay macmiil qaas ah oo aan dan ka lahayn qiimaha sidaas u badanMinyan waa warshad khibrad badan u leh sameynta lifaaqa Excavator, waxay leedahay koox injineernimo noo gaar ah, kooxda iibka, kooxda wax rarta & xamuulka, iyo in ka badan 100 shaqaale ah oo bixiya 100% feejignaan si loo dhiso 100% alaab tayo wanaagsan leh.Shirkadeena: XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTDGoobtayada: Gobolka Xuzhou Jiangsu, xarunta ugu weyn ee mashiinnada dhismaha ee Shiinaha.Alaabtayada: EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUKKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BULKET Ilkaha, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER, alaabteenu waxay ku habboon yihiin dhammaan noocyada moodeellada qodista. Sida CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAIGoobta macaamiisheena: Australia, America, Canada, Panama, Brazil, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Russia, Sweden Norway, Chile, France, Algeria, Angola, South Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines iyo wixii la mid ah.Marnaba ma joojinayno hagaajinta, waxaan dooneynaa inaan noqono kuwa ugu fiican warshadan, inaad ahaato mid lagu kalsoon yahay soo saaraha baaldiga.
Kartida Bixinta:300 Piece / Cadad bishiiba baaldi qodayaBaako & GeynFaahfaahinta Baakadahasariirtaada alwaax si aad uxirto baaldiga godkaDekedda LoadingLianyungang / Qingdao / Shanghai
Baaldi qaybsiga: hoos ayaa lagu faahfaahiyay
Dhismaha la xoojiyay
awood sare iyo waxqabad
ku habboon awoodda mashiinka. Biin
on ama faseexado heegan ah ayaa laga heli karaa,
2. Suxuunta Fiilooyinka
Si fiican u dhex mar tubbada birta
qaybinta xamuulka iyo adkeysiga.
Hore loo qoday si loogu daro ilaalinta dhinac dhinac ah.
4. Saxanka Side
5. Suxuunta Side Xidho
Taarikada dhinacyada ayaa la kulmaysa hoosta
xirtaan taarikada geeska aan xuduudda lahayn
ilaalinta. * Bir xoog badan
loo adeegsado ilaalinta dheeraadka ah.
6. Saldhig Edge
Toosan ama "spade", iyadoo kuxiran
Adkaanshaha ugu badan.
8. Kooxda Adjuster
Kuu ogolaanayaa sixitaanka fudud ee dharka
inta u dhexeysa usha iyo baaldiga.
9. Ilkaha (Talooyin)
Been abuur bir ah leh
kuwaas oo ilaaliya adkaanta dharka dheer
nolosha codsiyada adag qodaya
10. Dhinacyada Xaraashka & Dhinacyada ilaaliya
Difaac iyo dhexgal.
11. 2-Adapters adaab
12. Duub (Shell)
Qaab gacan laba-geesood ah, waxay kordhisaa nadiifinta ciribta waxayna hagaajisaa duugista.
13. Jaangooyooyinka Guntiga ah ee Hoose
Wuxuu ilaaliyaa aagga duubka oo wuxuu xoojiyaa, baaldi loogu talagalay xoog iyo adkaansho badan. Si fudud loo beddelay.
14. Indhaha kor u qaad
Wareeg ballaaran iyo naqshad indho khafiif ah oo si fudud ugu habboon isdhaafsiga shackle.
Baalduhu wuxuu ku habboon yahay xaaladaha shaqada ee soo socda.
Doorashada Xaqiiqda Dheeraadka ah
Doorashada baaldi qaldan waxay si fudud u yareyn kartaa wax soo saarka, waxayna kordhin kartaa qiimaha howlgalka 10-20% ama ka badan. Waxay sidoo kale u keeni kartaa daal aan loo baahnayn iyo daal labada mashiin iyo baaldiba.
Xaaladaha abrasion aad u sarreeya oo ay ku jiraan granite quartzite sare. Tusaale: Xaaladaha qodista ee nolosha noloshu ka yar tahay
ka badan ama la mid ah 200 saacadood oo leh talooyin dheeraad ah. Baaldiyadaha Waajibaadka Xad dhaafka ah waxaa lagu gaashaaman yahay difaac dheeri ah oo ka soo baxa xoqida iyo xirashada gouging. Kuwaas waxaa ka mid ah: Xidhmooyinka Geeska (A), Ilaaliyeyaasha Dhinacyada leh Shear Blocks [B], Qalabka Wear Dheeraadka ah ee dhinaca [C], iyo Saldhigga Edge End Protectors [D]
Xitaa difaac dheeraad ah ayaa loo heli karaa baaldiyo ku jira mashiinno waaweyn. baaldiyo sidoo kale waxaa ka mid ah: Liners [E], Base Edge Segments [F] iyo Farsamooyin Ku Xidhan Weelasha Farsamada (MAWPs) (MAWP-yada aan la muujin. Waxay ku yaalliin baaldiga hoostiisa.) Taargooyinka dhinaca ee dhinaca ayaa ka weyn; iyo Adapters-ka iyo tilmaamaha waa la qiyaasayaa si ay ula jaan qaadaan culeysyo badan iyo xaaladaha xoqida.
Hore: qodista baaldiga dhulgariirka
Xiga: baaldi shaandho baaldi